Lisuka kwi phepha lesi 5 | News24
Lisuka kwi phepha lesi 5
ukuziphatha xangaba unomsindo,” utshilo Sibozo. Wongeza ngelithi inani lezikolo ezikule nkqubo liyonyuka ngenxa yeengxaki ezijamelene nazo. Uthe apho ingxaki ingaphezulu kwamandla abo baye bacele uncede koonontlalontle.
“Iphulo lwezakhono silucalule kahlanu, nalapho siye senze izinto ezahlukeneyo ukuzama ukonwabisa abafundi nokwandisa ulwazi lwabo,” utshilo uSibozo.
Phakathi kokunye baye bathabathe uhambo lokonyuka intaba kunye nemiboniso yezemfundo yasesidlangalaleni.
U-Sibozo uthe umnqweno wabo kukusebenzisana nazo zonke izikolo zaseKhayelitsha neendawo eziyingqongileyo.
Othethele amapolisa kwisikhululo saseKhayelitsha uKapteni Ntandazo Mncanca ulichaze eli phulo njengelinemfundiso ebantwaneni.
Uthe bengamapolisa bakhuthaza abantwana ukuba bayeke ukwenza ubundlobongela, koko bajongane nezifundo zabo.
“Xa ngaba umntu efaka isicelo sokuba lipolisa zekufunyaniswe ukuba uyachaphazeleka kubundlobongela okanye wakhe wabanjwa lo mntu uye angathathwa. Kwaye ukuze uqeshwe esipoliseni kuyanyanzeleka ukuba ubenebanga leshumi kunye nesigunyazisi sokuqhuba,” ucacise watsho.
U Mncanca wongeza ngelithi awakho amabanga abagxile kuwo. Uthe ezenzululwazi kunye nezibalo zinika amathuba amahle okuchongwa.
“Zininzi izinto ezenziwayo esipoliseni, ngaphakathi kukho abantu abalungisa imoto, abaxilongayo, nabafotayo. Yiyo lonto simemelela ukuba ulutsha lugxile ezincwadini zalo khona ukuze babenamathuba amakhulu okungena esipoliseni,” utshilo Mncanca.
Utitshalakazi wesikolo sezoshishino iZola u-Nonkululeko Mbengo ubabaze lo msitho njengokhuthazayo kubafundi.
“Sineminyaka mithathu sisebenzisana ne-Iliso. Iyasincendisa ngakumbi ebantwaneni abenza izibalo. Kwaye iyabakhuthaza ukuba badlalele kude neziyobiso nakoonqevu,” utsho njalo Mbengo.
Ukanti u-Kamvalethu Ngqakayi, ominyaka ili 17, ofunda ibanga lesixhenxe e-Bulumko uchaze lo msitho njengonemfundiso nobavula ingqondo.
“Uyasikhuthaza ukuba sizazi ukuba sifuna ukuba yintoni kusekutsha singade siyofika kwibanga leshumi singazazi. Kwaye uyasikhuthaza ukuba sijonge incwadi singahoyi izinto zangaphandle,” ugqibezele ngelitshoyo u-Ngqakayi.